Kitra any Belzika: nahatafiditra baolina Ilaimaharitra Marco | NewsMada
Kitra any Belzika: nahatafiditra baolina Ilaimaharitra Marco
Nametraka ny anarany tao anatin’ireo mpilalao baolina kitra misongadina ny faran’ny herinandro lasa teo, ilay Malagasy Ilaimaharitra Marco. Nahavita dingana goavana ny tovolahy, nandritra ny andro faha-17 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Belzika, Diviziona 1. Nahatafiditra baolina mantsy izy tao anatin’ny fihaonan’ny ekipany Royal Charleroi Sporting Club sy ny Cerclebrugge KSV. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy 1 desambra lasa teo, tao amin’ny kianja Charleroi. Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa, mazava 3 no ho 1 ry Marco, tamin’izany.
Nahafaty ny baolina fahatelo, ho an’ny ekipany Ilaimaharitra Marco, teo amin’ny minitra faha-59. Marihina fa tompon-toerana, ny tovolahy, tamin’izany fihaonana izany. Manana isa 30 ny Royal Charleroi Sporting Club, taorian’ity fandresena azon’izy ireo ity, ary mipetraka eo amin’ny laharana fahefatra vonjimaika.
Marihina fa anisan’ireo mpilalao mpila ravinahitra nantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar Ilaimaharitra Marco, nandritra ireny fifanintsanana niadian-toerana ho an’ny “Can 2019”, ireny.